राष्ट्र बैंकले २० अर्ब तरलता तान्दै - नेपालबहस
१५ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता भएपछि २० अर्ब रुपैयाँ तान्ने भएको छ । बैंकहरुमा २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी तरलता थुप्रिए पछि रिभर्स रिपोमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता तान्न लागेको हो ।
७ दिनमा परिपक्व हुने गरी केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपो जारी गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता बढी भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्दछ । राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता अपुग भएको बेला रिपो जारी गरेर तरलता प्रवाह गर्ने गर्दछ ।
यस उपकरणको निष्कासनका दिन बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट रकम झिकिने भएकोले तोकिएको समयावधिको लागि तरलता प्रशोचन हुन्छ ।
किन बाेलायाे सनराईज बैंकका सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले ?
बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सबै शाखा कार्यालय खुला
राष्ट्र बैंकमा विभागका नाम फेरिए
गभर्नर अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीति बारे के भन्छन् बाणिज्य बैंकका सीईओहरु ?
Previous articleभासिएको सडक
Next articleसेलपे सेवाको एनीभर्सरी अफर
पोखरीमा डुबेर तीन बर्षीय बालकको मृत्यु